Katalana vita amin'ny boatin-tsolika, manual boaty flender, boaty boaty flender, mpamatsy boaty flender ao india, fanamboarana boaty flender, afrikana flender atsimo afrika, siemens flender gearbox manual, siemens gearbox manual
Gearboxes Helical Industrial
Boaty mavesatra matevina, Bevel Gearbox, reducer haingam-pandeha, ireo fitaovana fitaovam-pitaterana, vatan-tsoavaly mivaingana, fitaovam-piadiana mahery vaika, boaty fisolokiana ny helika, Helical bevel Gear Units
@Type Designation (tsy misy moto)
P: P andian-tsolika ho an'ny mpanampy haingam-pandeha
3: Tsia misy dingana, 1,2,3,4.
S: fomba famoahana. S-Solid'omby, H-hollow porofo, D-Hollow porofona misy kapila mihena.
H: Fomba fiakarana, H-Horizontal, M-Horizontal tsy misy tongotra, V-Vertical
8: marika modely amin'ny boaty
80: tahan'ny fitarafana
A: Fomba fananganana fomba
Sogear type Flender gearboxes dia manome turbo parallel shafts sy integral gear unit miaraka amin'ny motera elektrika na motera rivotra ary ny sasany hafa. Miaraka amin'ny fenitra famokarana sy fifehezana antsika marina, ny boaty gearbox tsirairay avy dia mahazo tombony amin'ny fampiharana be dia be toy ny simenitra, fitrandrahana, mpanelanelana, fitsaboana rano, indostrian'ny taratasy sns. Dimy taona mahery izahay taorian'ny nandraisan'ny Siemens AG, FLENDER AG. Ny boaty Generator dia azo ampiasaina amin'ny famokarana herinaratra lafo vidy ao anaty sambo. Izy ireo koa dia ampiasaina amin'ny motera diesel haingam-pandeha ary azo ampiasaina.
Ao amin'ny famaritana boaty Flender ：
izy ireo H andian-damaody indostrian'ny herinaratra avo lenta (herinaratra avo ary torana avo lenta)
1. HB boaty indostrialy mahazatra standard dia manangana ny firafitry ny vatan'ny fantsom-bidy, faritra misy ny kabinetra lehibe ary mpankafy lehibe, fitaovam-piasana cylindrical ary fitaovan'ny voromailala. Ny dingana mitsotra mivoatra dia ampiharina mba hahatonga ny mari-pana, ny fampihenan'ny tabataba ary ny fandidiana azo antoka amin'ny milina iray manontolo. Mihatsara ny firaisana ara-nofo ary mihamitombo ny hery mifindra.
2. Ny boaty indostrialy dia manamboatra ny tetika famolavolana manerantany mba hahatsapa ny trano fonenan'ny tsiranoka iraisana sy ny hazo orthogonal. Mihena ny karazana fizarana ary ampitomboina ny fanaingoana sy ny modely.
3, ny boaty fijanonana dia manana 3 amin'ny 26 karazana karazana, ny isan'ny fampihenana ny dingana fampihenana dia 1 mankany 4, ary ny tahan'ny hafainganam-pandehany dia 1.25 mankany 450.
4. Fomba fametrahana: fametrahana base, fametrahana goavambe, fametrahana base swing ary fametrahana sandry toriteny.
5. Fomba fampidirana: flange fifandraisana moto sy fidirana amin'ny serfa.
6. Ny fomba famoahana: vy matevina misy fanalahidy lemaka, lava-by matevina misy kofehy fisaka, tsipika goavambe miaraka amin'ny fanitarana iraisana, tsipika matevina miaraka amin'ny spline joint, lava matevina miaraka amin'ny spline joint ary matevina matevina miaraka amin'ny flange joint.
7, azo ampiana amin'ny lamosina araka ny takian'ny mpanjifa. Afangaro miaraka amin'ny andian-dahatsoratra R sy K hahazoana marika haingam-pandeha lehibe kokoa.
Salan'isan'ny haingam-pandeha: H andiany 1.25 ~ 450, B andiany 5 ~ 400
Sora-torolàlana: H andiany 2 ~ 900 kNm, B series 5.8 ~ 900 kNm
Lehibe herinaratra: H andiany 4 ~ 5000 kW, B series 2.8 ~ 3000kW
Herinaratra: Hatramin'ny 4800KW
Hafainganam-pandeha famoahana (r / min): 01- 1200
Torom-pifidianana (NM): Top to 952000N.M
Fomba famoahana: tohatra matevina misy fifandraisana misy lakile, mihemotra, kapila, matevina matevina sns.
Ny famolavolana modely tokana mora ho an'ny famokarana cross, stock ambany, fotoana fohy fandefasana.
Mitondra: fenitra Shina. Fa SKF, FAG, NSK, TIMKEN, NTN, KOYO, C&U dia azo zahana raha ilaina
Torsiam-pamoahana goavana, fanombohana malefaka, fahombiazana ambony, fihodinan'ny fiainana lava, amin'ny zoro ary mitsangana
Goavam-bolo vy fanadiovana avo, fanoherana ny fahatafintohinana mafy, ny fitaovam-panamoriana fototra dia manatsara ny fahafaha-mavesatra, fampisehoana hafanana ary mihena ny tabataba.
Ny tombo-kase amin'ny ampahany shaft dia manisy tombo-kase menaka roa miaraka amin'ny fanoherana menaka tonga lafatra. Ny tombo-kase tsara dia azo ampiharina amin'ny indostria.
Fitaovana vy vita amin'ny alàlan'ny fahadiovana avo lenta, fanoherana mahery vaika, fitaovam-piadiana amin'ny tany mombamomba ny fanatsarana ny fahaizan'ny entana, ny fihenan-tsofina ary ny fihenan'ny tabataba, ny fifindrana maharitra. Ny boatin-tranonkalanay Compact dia boaty avo lenta ho an'ny kapila mahazatra. Ny motera herinaratra dia ampifandraisina amin'ny boaty ho lasa singa tokana. Izahay dia serivisy fanamboarana sy fanamboarana serivisy amin'ny serivisy manerantany izay manompo ny filanao boaty vaovao novaina ho an'ny Flender Gearbox taloha na mila fanamboarana & Serivisy fanamafisana Chrome mafy.
Mampiasa efa ho 30 taona ny fahaizana injeniera mitambatra, ny fandefasana Sogear pwoer dia afaka manompo, manamboatra ary manavao ireo marika boaty misy marika miaraka amin'ny marika Flender. Manana traikefa am-polotaona maro izahay amin'ny fanamboarana boaty boaty Flender ho an'ny mpanjifa indostrialy sy an-dranomasina manerantany. ary izahay no serivisy haingam-pandeha haingana indrindra, manerantany manerantany amin'ny fanamboarana boaty boaty flender an'ny boaty Flender.
@ Fampiharana @Main
• mpampita entana & masinina sakafo • milina fitaterana
• Mixers • Coat & Mining • Zavamaniry akoho amam-borona • Fitaovana fanamboarana
• Taratasim-taratasy • Milina fanodinkodinam-bola • Feeder Rotary • Solika herinaratra sy angovo
• Fisondrotana, fisandratana • Fanamboarana seranan-tsambo sy sambo • Simenitra sy fitaovana • Herinaratra sy angovo herinaratra
• Mineraly vainafo • Fitsaboana ny lozika • indostrian'ny simika • mpamily fitaovana mifangaro
1. Manana traikefa famokarana taona maro.
2. Mpanamboatra izahay, manana zo mahaleo tena ny manondrana, ny vidiny tsara kokoa, afaka mifehy ny kalitao sy ny fotoana fandefasana.
3. Injeniera matihanina ho an'ny endrika famolavolana ataonao, ny sarinao, hiantoka ny kalitao famokarana raha tsy vokatra mahazatra.
4. Ho fantatra aminao ny sary sy ny sarimihetsika momba ny fanenjehana.
5. Ny vanim-potoanan'ny ady dia ny 12 volana.
Izahay dia manam-pahaizana momba ny boaty indostrialy avy any Shina, ny varotra Gearboxes feno toy ny Flender. Manana mpiasan'ny Sales amin'ny tontolo rehetra izahay ho an'ny serivisy tsara indrindra aorian'ny fivarotana. Ny famoizam-bokin'ny boaty dia mifangaro amin'ny Flender, efa nampiasaina nandritra ny taona maro tamin'ny fampiharana indostrialy sy an-dranomasina, ohatra amin'ny indostrian'ny simika, ny fanamboarana sambo ary ny tsenan'ny angovo rivotra. Stork Gears & ho an'ny ranomaso efa an-taonany maro niainana tamin'ny fanamboarana boaty Flender ho an'ny indostria sy an-dranomasina.
Ireo modely rehetra amin'ity karazanay ity:
Ireo modely rehetra amin'ity karazana Flender ity: